Qaabka wax loo akhristo
Asbaabaha dad badan fashalka imtixaanaadka u keeno waxaa ka mid ah in ay isku dayaan in ay akhriyaan wax ka badan awoodooda oo aysan horay u soo akhrisanin
Kor u qaadida garaadka ilmaha
Ma og tahay in qaabka ugu sahlan ee ilmaha garaadkooda kor loogu qaadi karo uu yahay arimahaan soo socda.
Qaabka loo koriyo Caqlkiga
waxaa hadda maalmahaan soo badanaya in dadku ay wada ictimaadeen aaladaha casriga ah iyagoo iska iloobay caqligii ilaahay siiyay inay kobciyaant.
Imtixaanka tarbiyada waxaa la qaadayaa 14.05.2017
Wakhtigu Waa Qaali
Ma ogtahay in wakhtiga aad aduunkaan joogto aad u yar yahay hadii aadan wakhtigaas yar uga faa'iidaysan weydo sida saxda ah inaad hadhow wax badan ka shalaayi doonto. Waxaad u baahan tahay qof wakhtigaaga kula habeeya sidii aad si sax ah uga faa'iidaysato
La soo xiriir Mustafe Hassan.
Kalmada Mudiirka Madarasada
Waxaa idanka ilaahay inoo gaba-gaboobi doona waxbarashadii aan soo wadnay sanad dugsiyeedka 2016-2017 anagoo ilaahay weydiisanayna inuu noogu dhameeyo sida ugu fiican.
waxaan kula dardaarmayaa waalidiinta
iyo caryyrtaba in waxbarashadii ......
Hubka maanta aduunka ugu khatarsan ee umadaha lagu burburiyo ayaa noqday waxa loo yaqaano media-ha adiga oo aan lagugu soo duulin sawaariikhna lagugu garaacin ayaad arkaysaa khatartii oo gurigaaga dhex taalo, umado badana sidaa ayaa lagu burburiyay gaar ahaan weerarka ku wajahan umadda muslimiinta.
Alle Ka cabso
Wax kasta waxaa asal u ah cabsida ilaahay iyada ayaana ilaahay u dardaarmay umadihii hore iyo kuwii dambe. Markazka al-furqaan waxaa aas-aas uga dhignay hadafna noo ah in qof kasta aan dajino meesha uu ku haboon yahay , maanta dad badan ayaa waxaa baabi'yay dad aan munaasab u ahayn meelaha ay maamulayaan
xaga cilmi ahaan iyo aqoon ahaanba
Waxaad ogaataa in safarka 1000 KM uu ka bilowda talaabo, Markazka al-furqaan wuxuu indhaha u furay caruur badan oo waalidkood quus ka taagnaayeen in aysan wax barin karin mudo gaabana ku soo saaray jiil aad da'doodu u yar yar tahay oo maanta
Mauris id tortor magna consequat...